Safarka uga socda Paris ee taga Amsterdam By Train In 3 saacadood | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Safarka uga socda Paris ee taga Amsterdam By Train In 3 saacadood
Waa run in ay jiraan wax ka badan hal hab si ay u gaaraan Amsterdam ka Paris. Oo intii kulligood waxay ay pro iyo khasaaraha ka iman, safarka ka Paris si ay u Amsterdam tareen weli ikhtiyaarka ugu fiican marka aad is bar bar dhigo ee. Waxaan ku siin dhan sababaha safarka tareenka waa in ay doorashadaada kowaad, gaar ahaan haddii aad rabto in aad timaado Amsterdam ka Paris si ammaan ah iyo in style iyo raaxada.
Paris si Amsterdam by Tareen vs. Hababka kale ee Safarka
Ku safridda baabuurta ee ka timaadda Paris illaa Amsterdam waa shaki la'aan a picturesque drive. Si kastaba ha ahaatee, waxa keliya oo macno haddii aad awoodi karin waqtiga iyo ayaa kalsooni ku filan si ay u maraan waddooyinka u dhexeeya labada magaalo.
Marka laga kaas oo wadada aad qaadan on your safar baabuur ka Paris si ay u Amsterdam, waxaa jira jidadka waawayn, toll, iyo isticmaalka shidaalka in aad ka fikirto. drive The qaadan kartaa ilaa 6 saacadood, at ugu fiican; si aad u baahan tahay si ay u qorsheeyaan ka hartay aad joogsato. Sidoo kale, fiirso adeegyada kasta iyo shidaalka loo baahan yahay jidka, iyo sidoo kale nasashada qadada ah. Dhamaan kharashyada kuwa oo kor u dari doonaa karaa.
Waxaa sameyn kartaa qaadashada baska maxaa yeelay, aad maqashay waxa ku habka ugu jaban inay u safraan Amsterdam ka Paris. Iyada oo ay tani waa run, safarka ku dhowaad qaadan doonaa 7 saacadood. Taasi waa waqti dheer in ay wadada. Waxaa dareemi doontaa xataa dheer, maxaa yeelay, waxaad tahay hawadu in a baska intii kooban ay ku dhaqdhaqaaqi.
sidoo kale waxaa jira fursad u duuli ka Paris si ay u Amsterdam. Laakiin halka diyaarad qaadan doonaa oo kaliya saacad iyo 15 daqiiqo, ma bixiso wax la mid ah sida dhulka oo loogu safro. Haddii aad tahay qof in darajada koowaad, waxaad ka heli doontaa naftaada sarreysa ee kuraasta diyaarada raaxo.
Waxa kale oo jira qurux badan lahayn muuqaal Yurub inay ku raaxaystaan ​​marka aad u safarto diyaarad. inta badan doonaa inaad daruuraha leeyihiin meel ka baxsan si ay u eegaan haddii ay dhacdo in aad adigu fadhiisan kursiga daaqad; haddii kale, aad ku kalsoonaan kartaa on an ee horyaalka movie si aad marti qaaday. Ha iloobin in halka ku safraya diyaarad aragti ahaan waa jidka ugu dhakhsaha badan si aad u hesho in ay Amsterdam ka Paris, waxaad weli u baahan tahay inaad Factor ee waqti iyo lacag ku qaadan doonaa si aad u hesho garoonka diyaaradaha.
Raaxada iyo Fududeynta ee Paris ee Amsterdam waxaa qoray Train
Markay tahay inaad ka safarto Paris oo aado Amsterdam, tareenka la raaco tareenka Thalys wuxuu bixiyaa waxa ugu fiican adduunka oo dhan. Waa muran habka ugu raaxo leh oo ku habboon in ay u safraan si ay u mahad tababar-xawaaraha sare. Waad ku wareegi kartaa si sahlan adigoon xitaa ogayn inuu dhaqaaqayo.
Waxa kale oo aad dareemi doontaa badbaado inaad ku safarto tareenka, og aadan wadooyinka iyo jidadka waaweyn la darawallada qayrul-wadaago. Oo xawaare ah 300 km saacadiiba, aad gaadhaan caga wakhtiga badhkiis ku qaadan lahaa baabuurka ama bas. tareenada-xawaaraha sare ee aad u Amsterdam ka Paris heli karaa 3 saacadood oo 19 daqiiqo. Iyo ka duwan ku safridda diyaaradda, waxaad yeelan doontaa ah baadiyaha cajiib Yurub inay ku raaxaystaan.
Jartaan tikidhka tareenka aad ka hor, oo aad ku raaxaysan karaan heerarka ugu jaban, qaadashada by safraya tababar doorashada ka dhaqaale badan haddii aad qorsheyneyso.
Adigoo la safraya Thalys Tareenadu, waxaad ka iibsan kartaa tigidhada ilaa 90 maalmood ka hor taariikhda safarkaaga iyo badbaadin karo 75% on tigidhada tareenka haddii aad leenahay kuraasta aad hore.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit leh link si post blog this, ama aad halkan riix: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftravel-paris-amsterdam-train%2F%3Flang%3Dso - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
#traveleurope europeantravel europetravel longtrainjourneys talooyin trainjourney Tranride tareenada caarada tababarka talooyin tareenka tareen safarka Talooyin safarka tareenka safarka tareenka safarka travelamsterdam traveltips